ရင်သားကင်ဆာအတွက် ထိရောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ဘာတွေလဲ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » ရင်သားကင်ဆာ » ရင်သားကင်ဆာအတွက် ထိရောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ဘာတွေလဲ
ရင်သားကင်ဆာအတွက် ထိရောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ဘာတွေလဲ
ရင်သားကင်ဆာ အတည်ပြုခြင်းခံရပြီးပါက လူအများစုသည် ခံစားချက်များ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများ ခံစားရစေပါတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်လာပါက ရောဂါကိုရေရှည် တိုက်ခိုက်နိုင်ရန် မိမိကိုယ်မိမိ စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ယူဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ထိုသို့ တည်ငြိမ်စေသော လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွင်းစိတ်အေးချမ်းမှု လိုအပ်ပါတယ်။ သွေးပူ တည်ငြိမ်လေ့ကျင့်ခန်း၊ တရားထိုင်ခြင်း၊ အသက်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းထုတ်ခြင်း များပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပထမခြေလှမ်း- နှစ်မိနစ်ကြာ တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ခြင်း
ရှေးဦးစွာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြေလျော့စေပြီး အတွေးအာရုံနဲ့ အသက်ရှူခြင်းကို အာရုံစိုက်ထားပါ။ အသက်ကို ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန် ရှူသွင်း၊ရှူထုတ်ပါ။ တင်းကြပ်မှုများခံစားရပါက ဦးခေါင်းကို စက်ဝိုင်းပုံစံ တစ်ကြိမ်၊နှစ်ကြိမ်ခန့် လှည့်လှုပ်ရှားခြင်းဖြင့် ပြေလျော့အောင်လုပ်ပါ။ နာကျင်ပါက ချက်ချင်းရပ်ပါ။ ထို့နောက် ပုခုံးကို ရှေ့တိုး၊နောက်ဆုတ် စက်ဝိုင်းပုံစံ လှည့်ပါ။ တည်ငြိမ်သွားသည်အထိ အသက်ကို ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်ရှူပါ။
ဒုတိယအနေနဲ့ ကောင်းသောအတွေးကို တွေးခြင်းဖြင့် စ်ိတ်ကို ပြေလျော့ပါစေ။ သည်အနေတွင်လည်း မျက်လုံးမှိတ်ကာ အသက်ကို ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်ရှူပါ။ အကောင်းဘက်ကတွေးခြင်း၊ မိမိကိုယ်မိမိ ‘ငြိမ်းချမ်းမှု’ ‘မျှော်လင့်ခြင်း’ ‘ငါဟာတည်ငြိမ်နေတယ်’ စသည်ဖြင့် တိုးသာစွာ စကားပြောခြင်းဖြင့် အတွင်းစ်ိတ်အေးချမ်းမှုကို ရယူပါ။ စိတ်ကို တခြားမရောက်ဘဲ ၁၀ မိနစ်ခန့် မိမိ အတွေးကိုသာ အာရုံစိုက်ထားပါ။ အသက်ရှူခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ထားသော စကားများကို အာရုံစိုက်ခြင်းကလည်း အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းရှူခြင်းဖြင့် အောက်စီဂျင်ပမာဏ အများကြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ကာ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိုးရ်ိမ်မှုများကို ပြေလျော့စေပါတယ်။ နည်းလမ်းအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ- သင့်ဗိုက်ကို အသက်ရှူသွင်းခြင်းဖြင့် လေများပြည့်စေကာ တတ်နိုင်သလောက် ခပ်များများ ရှူသွင်းပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ရှူထုတ်ပါ။ အကြိမ်များစွာ ပြုလုပ်ပြီး တည်ငြိမ်သွားပါက အနားယူပါ။
စတုတ္ထခြေလှမ်း- guided imagery
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အသက်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းခြင်းနှင့် စိတ်ကို ပြေလျော့စေခြင်းနည်းလမ်းကို ပေါင်းပြီး guided imagery လို့ခေါ်ပါတယ်။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူသည့်အပေါ် အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့် ကောင်းသော အတွေး၊မှတ်ဥာဏ်များကို တွေးခြင်း တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။
ထို့ပြင် သဘာဝရဲ့ သံစဉ်များဖြစ်တဲ့ ရေတံခွန်ရေကျသံ၊ ပင်လယ်ရေလှိုင်းအသံ၊ စသည်တို့၏ record အသံများကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအသံများက သင့်ကို တည်ငြိမ်ခြင်း၊ လုံခြုံခြင်း၊ အေးချမ်းခြင်းများကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် yoga, tai chi, Qigong စသည်တို့ကို ကျန်းမာရေးစင်တာများတွင် စမ်း၍ ပြုလုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန် အတော်များများက ထိုကုထုံးများကို စ်ိတ်ဖိစီးမှုကို ကုသခြင်းနှင့် ကင်ဆာ ကုထုံးများကို လွှန်စွာ အထောက်အကူပြုခြင်းတုိ့ကြောင့် ထောက်ခံကြပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မေ 27, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မေ 22, 2019
Breast Cancer: Get the Support You Need. http://www.webmd.com/breast-cancer/guide/breast-cancer-getting-support. Accessed August 20, 2016.
Relaxation Techniques and Mind/Body Practices: How They Can Help You Cope With Cancer. http://www.cancercare.org/publications/54-relaxation_techniques_and_mind_body_practices_how_they_can_help_you_cope_with_cancer. Accessed August 20, 2016.
The effects of relaxation on reducing depression, anxiety, and stress in women who underwent mastectomy for breast cancer. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590692/. Accessed August 20, 2016.
သင့်ရဲ့လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာကင်ဆာအတွက် အရင်းအမြစ်တွေ ဘယ်လိုရှာဖွေကြမလဲ
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကို ရင်သားကင်ဆာက ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိမလဲ
ရင်သားကင်ဆာ နှင့် အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာ
ရင်သားကင်ဆာပြန်ဖြစ်မှာ ကြောက်ရွံ့ စိတ်ကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ
ရင်သားကင်ဆာ – အရိုးပျံ့နှံ့ မှု
ကင်ဆာကို ဓာတုကုထုံးခံယူဖို့အတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ
ရင်သားကင်ဆာခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် ဘရာစီယာ ရွေးချယ်ခြင်း
ရင်သားအကျိတ် (သို့ ) ရင်သားနာကျင်ခြင်းက ရင်သားကင်ဆာလား